Xog: Xildhibaano laga hor-istaagay inay ka shiraan askarta lagu la'yahay Eritrea - Caasimada Online
Home Warar Xog: Xildhibaano laga hor-istaagay inay ka shiraan askarta lagu la’yahay Eritrea
Xog: Xildhibaano laga hor-istaagay inay ka shiraan askarta lagu la’yahay Eritrea
Muqdisho (Caasimada Online) – Sida ay Caasimada Online u xaqiijiyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa is hortaagay shir muhiim ah oo ay xildhibaano ka mid ah Golaha Shacabka ka yeelan lahaayeen xaaladda Soomaaliya.
Xogta aan helnay ayaa tilmaameysa in shirkaan uu ka dhici lahaa Villa Hargeysa oo ah xarunta ku meel gaarka ah ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana la damacsanaa in looga hadlo laba qodob oo kala ah, doorashada iyo dhallinyarada lagu la’yahay dalka Eritrea.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee BFS ayaa la sheegay inuu bixiyay amar tilmaamaya in aanan la furi karin xarunta baarlamanka, iyadoo markii ay doodda sii badatay la sheegay in la beddalay dhamaan furayaashii xarunta laguna xiray Sakatuurooyin cusub.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa la sheegay in ay guddoomiye Mursal siisay amarka lagu joojiyay fadhiga baarlamaanka iyadoo diidan qodobada la qorsheeyay in laga hadlo.
Xildhibaanada kulankaan soo abaabulay ayaa la sheegay in ay u badanyihiin kuwa mucaarad ah islamarkaana aad u diidanaa sida ay Xukuumada Soomaaliya u maareysay qeyla dhaanta waalidiinta Soomaaliyeed oo ay carruurta ka maqanyihiin iyo dooda ka taagan doorashada Soomaaliya.
Dhowaan ayaa Guddiga Arrimada Dibadda Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya waxa uu waraaq ku saabsan ciidamada lagu la’yahay dalka Eritrea u gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Farmaajo weli kama soo jawaabin codsiga guddiga.